Vinavina ny mety ho rotsakorana: - Madagascar Informations
Vinavina ny mety ho rotsakorana:
Antoka ho fampandeanana ny drafitrasa amin’ny fotoana maharitra
(MANAN-KERY NY 11 HATRAMIN’NY 24 JONA 2018)
Hotohizana hatrany ny famaliana ny hetahetan’ny besinimaro amin’ny fanomezana ho antsika ny vinavina ny amin’ny habetsahan’ny orana mandritra ny roa herinandro ho avy. Hahafahana miomana mialoha ny amin’ny fotodrafitrasa sy ny sehatra fambolena sy fiompiana ary ny asa andavanandro no anton’izany.
Raha atao jery todika ny herinandro lasa izany hoe ny 04 hatramin’ny 10 Jona dia nalefaka kokoa ny orana (25 hatramin’ny 50 mm) tamin’ny distrikan’I Sainte-Marie sy Toliara.
Ho be ny rotsakorana (100 hatramin’ny 150 mm) ny herinandro voalohany izany hoe ny 11 hatramin’ny 17 Jona amin’ny Distrikan’i Sainte Marie ; malefaka na antoniny izany (50 hatramin’ny 100 mm) any amin’ny distrikan’ Antalaha, Mananara Avaratra, Soanierana Ivongo, Fenoarivo Atsinanana ary Mananjary
Hisitraka orana ihany koa (75 hatramin’ny 100 mm) ny herinandro faharoa ny 18 hatramin’ny 24 Jona 2018 ny Distrikan’i Sainte-Marie ; malefaka na antoniny izany (25 hatramin’ny 50 mm) any Anlanjirofo sy amin’ny distrikan’ Nosy Varika, Mananjary, Manakara ary Vohipeno.
Tsy misy ahiana ny mahakasika ny fiforonan’ny rivodoza sady efa dila ny vanim-potoanan’ny rivodoza.
← Fiara-mientana ho fampandrosoana an’i Bongolava
Mila jerena ny tontolo Ambanivohitra →
7 mars 2017 Madagascar Informations 0